चीन कास्ट आयरन फ्लोटि Fla flanged बल वाल्व ANSI १५०# निर्माता र आपूर्तिकर्ता - Yongyuan वाल्व
उत्पादन कास्टिंग प्रक्रिया
आर एण्ड डी शक्ति
उपकरण र सेवाहरु
Flnaged बल वाल्व
थ्रेडेड बल वाल्व
Grooved बल वाल्व
वाल्व जाँच गर्नुहोस्
Flnaged जाँच वाल्व
थ्रेडेड चेक वाल्व
नाली जाँच वाल्व
घर > उत्पादनहरु > बल भल्भ > Flnaged बल वाल्व > कास्ट फलाम अस्थायी Flanged बल वाल्व ANSI १५०#
कास्ट इस्पात अस्थायी Flanged बल वाल्व
स्टेनलेस स्टील अस्थायी Flanged बल वाल्व वर्ग
कास्ट फलाम अस्थायी Flanged बल वाल्व ANSI १५०#
Grooved तन्य फलाम बल वाल्व पूर्ण पोर्ट 750-1000 Wog
कास्ट स्टील बल वाल्व
यो कास्ट फलाम अस्थायी flanged बल वाल्व ANSI 150# ANSI B16.10, ANSI B16.1 र API 598, यो कास्ट Iron.We संग बनेको थियो हाम्रो कारखाना छ, सामग्री ग्राहक आवश्यकताहरु अनुसार अनुकूलित गर्न सकिन्छ। हामी ५ years बर्ष को लागी भल्भ ब्यापार को लागी समर्पित गरिएको छ, बिक्री बजार कभर उत्तरी अमेरिका र दक्षिण पूर्व Asia.We तपाइँको लामो अवधिको साझेदार बन्ने अपेक्षा गरीरहेका छन्।
कास्ट आयरनअस्थायी Flanged बल वाल्व कक्षा १५०#
मा प्रयोग गरिएको बलकास्ट आयरनअस्थायी Flanged बल वाल्व ANSI १५०#एक अस्थायी बल हो। जडान मोड निकलाउने छ। मध्यम दबाव को कार्य को अन्तर्गत, बल आउटलेट अन्त को सील सुनिश्चित गर्न को लागी आउटलेट अन्त को सील सतह मा एक निश्चित विस्थापन र कम्प्रेस उत्पादन गर्न सक्छ। कम दबाव बल भल्भ मा प्रयोग गरीन्छ।
2.कास्ट आयरन Floating Flanged Ball Valve ANSI 150# उत्पादन सुविधा र आवेदन
डिजाइन र निर्माण (पूर्ण पोर्ट)
आमनेसामने: ANSI B16.10
निकला हुआ किनारा: ANSI B16.1 / B16.5
दबाव परीक्षण: एपीआई ५ 8
अनुरोध मा उपलब्ध निकला हुआ किनारा फेसिंग
1/2â € ™ â €/3/4â € ™ â ™ 1â € ™ â -1 1-1/4â ™ ™ € ™ 1-1/2â € â ™ â 2â €-2- 1/2â € ™ â â ™ 2-1/2â € ™ â ™ 3â € ™ â ™ 4â € â € ™ 5â ™ € ™ â â â â â ever ever ever
8â € ™ â â ™ 10â ™ â â ™ गियर संचालित
3. कास्ट आयरनअस्थायी Flanged बल वाल्व ANSI 150# उत्पाद विवरण
कोकास्ट आयरनअस्थायी Flanged बल वाल्व ANSI १५०#बल वाल्व को उत्पादन प्रकार हो।
सही स्विच संग ह्यान्डल: फ्लैट टाउको भल्भ स्टेम को उपयोग गरी, ह्यान्डल संग जडान गलत हुनेछैन, ताकि स्विच राज्य ह्यान्डल द्वारा संकेत गरीयो र भल्भ सही छ सुनिश्चित गर्न को लागी। ताला उपकरण: आदेश मा भल्भ स्विच को misoperation रोक्न को लागी, त्यहाँ वाल्व को पूर्णतया खुला र पुरा तरिकाले बन्द स्थिति मा छेद ताल्चा सही स्थिति मा छ सुनिश्चित गर्न को लागी हो। स्टेम विरोधी blowout प्रमाण संरचना: स्टेम तल माउन्ट गरीएको छ दबाव बाट बाहिर उडान रोक्न, र आगो पछि भल्भ शरीर संग धातु सम्पर्क बनाउन सक्छ, भल्भ स्टेम सील सुनिश्चित गर्न को लागी।
लागू माध्यम: पानी, ग्यास, तेल, प्राकृतिक ग्याँस रआदि.
4. कास्ट आयरनअस्थायी Flanged बल वाल्व ANSI 150# उत्पाद योग्यता
हामी ISO9001 व्यवस्थापन प्रणाली को प्रमाणपत्र 2000 मा प्राप्त छ, टीएस निर्माण लाइसेन्स (पाइपलाइन र वाल्व को लागी राष्ट्रीय विशेष उपकरण) 2006 मा र एपीआई 6D (अमेरिकन पेट्रोलियम संस्थान) लाइसेन्स 2012 मा।
5. कास्ट आयरनअस्थायी Flanged बल वाल्व ANSI १५०# उद्धार, ढुवानी र सेवा
राम्रो टेक्नोलोजी र उच्च गुणस्तरीय, सकारात्मक कर्पोरेट संस्कृति को कर्मचारी टीम संग, हामी गुणस्तरीय सेवा संग हाम्रो ग्राहकहरु लाई प्रदान गर्न को लागी समर्पित छौं, गुणवत्ता, दक्षता, नवीनता को अवधारणा को पालन।
प्रश्न: तपाइँको उत्पादनहरु मानकीकरण के हो?
A: हाम्रो उपकरण को निर्माण मानक API 6D, दीन, GB र JIS हो।
प्रश्न: कति बर्ष तपाइँको कम्पनीले यस प्रकारको उपकरण बनाएको छ?
एक: हामी वाल्व व्यापार को लागी ५ 57 बर्ष को लागी समर्पित गरिएको छ।
प्रश्न: तपाइँ तपाइँको उपकरण को लागी कुन प्रमाणपत्र छ?
A: हामी ISO9001: 2015, API 6D, SNF372, API607, API6FD प्रमाणपत्र छ।
प्रश्न: तपाइँ तपाइँको कारखाना मा कति कर्मचारीहरु छन्?
एक: कम्पनी ५५५6 square वर्ग मीटर को एक क्षेत्र, ५०००० वर्ग मीटर को कार्यशाला र २7 कर्मचारीहरु संग कभर गर्दछ।
प्रश्न: के तपाइँ उपकरण को कुनै पनि वास्तविक परियोजना तस्वीर छ?
A: हो, हामीसँग छ।
Q: तपाइँको कारखाना कहाँ अवस्थित छ?
A: हाम्रो कारखाना Yongkang शहर, Zhejiang प्रान्त, चीन को आर्थिक विकास क्षेत्र मा स्थित छ।
Q: तपाइँ एक व्यापारिक कम्पनी वा एक निर्माता हुनुहुन्छ?
A: हामी एक निर्माता हो।
हट ट्याग: कास्ट आयरन फ्लोटि Fla Flanged बल वाल्व एएनएसआई १५०#, निर्माताहरु, आपूर्तिकर्ताहरु, थोक, कारखाना, स्टक मा, नि: शुल्क नमूना, ब्रान्ड, चीन मा बनेको, चीन, छुट, कम मूल्य, किन्नुहोस् छुट, मूल्य, उद्धरण, सीई, गुणस्तर, उन्नत, टिकाऊ, सजीलो रखरखाव योग्य, उत्तम दर्जे का, फैंसी, फाउन्ड्री
कास्ट इस्पात अस्थायी Flanged बल वाल्व कक्षा १५०#
अस्थायी Flanged बल वाल्व कक्षा १५०#
अस्थायी Flanged बल वाल्व
कास्ट स्टील Flanged बल वाल्व
कास्ट इस्पात अस्थायी Flanged बल वाल्व कक्षा 300#
Yongkang शहर को आर्थिक विकास क्षेत्र, Zhejiang प्रान्त, चीन 87,89Mingyuan, उत्तर रोड
प्रतिलिपि अधिकार © २०२१ Zhejiang Yongyuan वाल्व कं, लिमिटेड। सबै अधिकार सुरक्षित।